အတိုက်အခံတွေကို ထောင်ချပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်လိုက်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ဒူတာတေး
စွပ်စွဲပြင်တင်မယ့်သူတွေကို ဒူတာတေးက ခြိမ်းခြောက်လိုက်ပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ရိုဒရီဂို ဒူတာတေးက ၎င်းအား စွပ်စွဲပြင်တင်ပြီး ရာထူးမှဖယ်ရှားရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ရင် ထောင်ချခံရမယ်လို့ အတိုက်အခံတွေကို ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
(ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ဒူတာတေး) (Photo: Andrew Harnik/Pool via Reuters)
ကုလသမဂ္ဂ ထိပ်တန်းအရာရှိတစ်ဦးနဲ့ အာရှလွှတ်တော်အမတ်အုပ်စုတစ်ခုက သမ္မတဒူတာတေးဟာ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အပေါ် ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်တဲ့ ပုံစံဖြစ်နေကြောင်း ဝေဖန်မှုရှိခဲ့ပြီးနောက် ဒူတာတေးရဲ့ ယခု ခြိမ်းခြောက်မှုထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လ ၉ ရက်မှာ တရုတ်သင်္ဘောတစ်စီးကြောင့် ဖိလစ်ပိုင် ငါးဖမ်းရေယာဉ်တစ်စီး နစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒူတာတေးက တရုတ်ဘက်မှ ရပ်တည်နေကြောင်း မီဒီယာတွေမှာ အပြင်းအထန် ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေ ရှိနေခဲ့ပြီးနောက် ကြာသပတေးနေ့ (ဇွန် ၂၇ ရက်) နှောင်းပိုင်းမှာ ၎င်းက ဒေါသပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ဒူတာတေးနှင့် တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင်းပင်) (Photo: AP)
တရုတ်သင်္ဘောကြောင့် ဖိလစ်ပိုင် ငါးဖမ်းရေယာဉ် နစ်မြုပ်မှုဟာ ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ အထူးစီးပွားရေးဇုန် (Exclusive Economic Zone - EEZ) အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ထိုဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတဒူတာတေးက တရုတ်အစိုးရရဲ့ လေသံအတိုင်းလိုက်ပြီး မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒူတာတေးက ထိုသို့ မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားခဲ့မှုအပေါ် ထိပ်တန်းတရားသူကြီးတစ်ဦးနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းတစ်ဦးတို့ အပါအဝင် ဖိလစ်ပိုင်မှာ ထင်ရှားသူတွေက ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းတို့က သမ္မတဒူတာတေးရဲ့ ယခုပြောဆိုမှုဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ကြောင်း သို့မဟုတ် ၎င်းကို စွပ်စွဲပြစ်တင်ကာ ရာထူးမှဖယ်ရှားထိုက်ကြောင်း ပြောခဲ့ကြပါတယ်။
(ဖိလစ်ပိုင်မှာ တရုတ်အစိုးရကို ဆန္ဒပြမှု) (Photo: AP)
ထိုသို့ ဝေဖန်နေမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတဒူတာတေးက "ကျုပ်ကိုလား? စွပ်စွဲပြစ်တင်မယ်လား? ကျုပ်က သူတို့အားလုံးကို ထောင်ချပစ်လိုက်မှာပေါ့၊ ကြိုးစားကြည့်လိုက်လေ၊ ကျုပ်က အဲဒီလိုလုပ်မှာ၊ ခွေးမသား" လို့ သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ဒေါသတကြီး တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် "ခင်ဗျားတို့ကို အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ ကျုပ် စိန်ခေါ်တယ်၊ ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်ကို အမှန်တစ်ကယ် အဲဒီလို လုပ်စေချင်ကြတာလား? ကောင်းပြီလေ၊ ခင်ဗျားတို့ ခွေးမသားတွေ၊ လုပ်စမ်းပါ၊ ဟုတ်တယ်၊ ကျုပ်ကို စွပ်စွဲပြစ်တင်ပြီး ဖယ်ရှားဖို့ လုပ်လိုက်စမ်းပါ" လို့လည်း ဒူတာတေးက ၎င်းရဲ့ပုံစံအတိုင်း ဒေါသတကြီးဖြင့် ကြမ်းတမ်းစွာ ပြောဆိုသွားခဲ့ကြောင်း Reuters သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
(ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီး Michelle Bachelet) (Photo: afric.online)
အင်္ဂါနေ့ (ဇွန် ၂၅ ရက်) မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ASEAN Parliamentarians for Human Rights ရဲ့ အစီရင်ခံစာက ဒူတာတေးအစိုးရဟာ အတိုက်အခံတွေကို ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ရန်လိုပြောဆိုမှုနဲ့ မဟုတ်မမှန်တဲ့ ရာဇဝတ်ပြစ်မှုများဖြင့် စွဲချက်တင်မှုတို့ဖြင့် နှိပ်ကွက်နေပြီး မဝေဖန်နိုင်ရန်နဲ့ အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမှုကို အားနည်းစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြောင်း ဝေဖန်ထားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီး Michelle Bachelet ကလည်း ဖိလစ်ပိုင်မှာ မိမိရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူတွေအတွက် အမှန်တစ်ကယ် အကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်ရှိနေကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေက ထိုသို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆို ဝေဖန်သူတွေကို လူသိရှင်ကြား ခြိမ်းခြောက်မှုတွေတော့ မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
(ဒူတာတေးနှင့် တရုတ်အစိုးရကို ဖိလစ်ပိုင်မှာ ဆန္ဒပြစဉ်) (Photo: AP)
အတိုက်အခံတွေကို ထောင်ချခံရမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတဒူတာတေးရဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Salvador Panelo ကတော့ သမ္မတအနေနဲ့ နိုင်ငံရဲ့ကောင်းကျိုးကိစ္စတွေကို စိတ်ထဲ နှလုံးသားထဲမှာထည့်ပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ် လူတွေက မသိမြင်နိုင်ကြခြင်းကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။